राति सपनामा के देखे शुभ के देखे अशुभ ? – Sandesh Press
August 2, 2021 278
मयुर देख्नु भो भने पनि तपाइँलाई शुभ फल मिल्छ । मयुरमा शनि सवार भएको देख्नु अझै राम्रो मानिन्छ ।त्यस्तै सपनामा कौवा देख्नु भो भने यसले तपाइँलाई सुख शान्ति हरण हुने संकेत दिन्छ । ज्योतिष शास्त्रे सपनामा कौवा देख्दा परिवारमा वादविवाद हुने र अपमान आइलाग्ने बताउँछ ।
Prevफेरि झनै कडा गरि कति लम्ब्याइयो निषेधाज्ञा ? अब घरबाहिर पनि निस्किन नपाइने
Nextकतारबाट खोजी गर्दै ७ महिनाको ग’र्भ लिएर नेपाल आएकी चेलीको पी’डा
बिहे नगरेकाेमा लकडाउनले पछुताे महसुस गरायाे : राजेशपायल राई